Manomboka mandray Android Oreo amin'ny fomba ofisialy ny Moto X4 | Androidsis
Tonga hatrany amin'ny telefaona Android Android na dia mandeha haingana kokoa noho ny nandrasana aza izy io. Ny ankamaroan'ny fitaovana avo lenta dia efa manana kinovan'ny rafitra fiasa. Ka tsikelikely dia ho avy ny fihodinan'ny afovoany. Amin'ity tranga ity, iray amin'ireo voalohany nahazo Android Oreo ny Moto X4. Ny fitaovana Motorola dia efa mandray ny fanavaozana.
Amin'izao fotoana izao ireo mpampiasa any Etazonia izay manana ny Moto X4 dia nanomboka nahazo ny fanavaozana ny Android Oreo. Vaovao tsara, rehefa mahita fizarana tsena hafa manomboka manavao ihany koa isika.
Septambra lasa teo ny marika dia nanamafy izay telefaona mety hahazo ny fanavaozana ny Android Oreo. Ahoana no fomba hafa, ao amin'ny lisitry ny fitaovana no Moto X4. Ary koa ny Moto Z2 Play, izay toa ny manaraka no mandray ilay fanavaozana.
Hitanay izany Manomboka manana hetsika maro i Motorola amin'io lafiny io. Amin'izao aloha, ny voalohany manomboka mandray Android Oreo amin'ny Moto X4 anao dia mpampiasa US. Mpampiasa maro no nizara sary tamin'ny tambajotra. Saingy amin'izao fotoana izao dia mbola tsy nahatratra olona ivelan'ny firenena izany.
Ka toa ny any Eropa sy ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao dia mbola mila miandry kely kokoa isika. Azo antoka fa amin'ny herinandro manaraka dia tokony hanomboka amin'ny mpampiasa izany. Na izany aza, tsy maintsy miandry ny orinasa vao manamafy ny momba azy isika. Fa, amin'izao fotoana izao dia zava-misy fa efa mandray Android Oreo ny Moto X4.
Ireo mpampiasa miaraka amin'ny Moto Z2 Play koa dia afaka manomboka miomana. Satria manomboka mandray kinova fitsapana ny fanavaozana ilay fitaovana. Ka herinandro vitsivitsy ihany koa vao ho azo ny fanavaozana ofisialy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Version » Tonga amin'ny fomba ofisialy amin'ny Moto X4 i Android Oreo
Vernee X: Unboxing sy ny fiheverana voalohany